Famokarana herinaratra: tohanana sy hiantohana ny orinasa madinika | NewsMada
Famokarana herinaratra: tohanana sy hiantohana ny orinasa madinika
Tanjon’ny fitondram-panjakana ny hahazoan’ny 50%-n’ny Malagasy herinaratra amin’ny taona 2023. Mila paikady sy fomba fiasa matotra izany ary anisany ny hanohanana ny orinasa madinika sy salantsalany amin’ny famokarana angovo azo havaozina.
Manana vina lehibe ny fitondram-panjakana amin’ny lafiny angovo sy ny herinaratra.
Misy ny paikady manokana, hanomezana vahana ny orinasa tsy miankina hanatanterahana izany iarahana amin’ny mpiara-miombon’antoka iraisam-pirenena. Nampahafantarin’ny Antokon-draharaha misahana ny fiantohana amin’ny lafiny varotra aty Afrika (ACA), omaly, ny drafitra Fanamorana isam-paritra hanohanana ny lafiny fandoavam-bola (RLSF). Drafitrasa hampiasain’ny ACA, hanohanana ny firenena an-dalam-pandrosoana hamporoboroboana ny sehatry ny angovo sy ny herinaratra.
Nilaza ny minisitry ny Angovo, ny rano ary ny akoranafo (MEEH), Andriamanga Vonjy, fa tanjona ny hahazoan’ny 50%-n’ny Malagasy herinaratra amin’ny taona 2023 “hanatrarana izany ny hampiroboroboana ny angovo azo havaozina”.
Niara-namolavola ny RLSF ny ACA sy ny Banky alemà ho an’ny fampandrosoana, ny KFW, ka avy amin’ny minisitera alemà ho an’ny fiaraha-miasa toekarena sy ny fampandrosoana (BMZ) ny 50% amin’izany, mitentina 63 tapitrisa euros.
Hamidy amin’ny Jirama ny herinaratra
Amin’ity fandaharanasa ity, sahanin’ny RLSF ny antoka ara-bola ho an’ny orinasa mamokatra herinaratra madinika na salantsalany (hatramin’ny 50 MW na tsy mihoatra ny 100 MW). Tohanana ny orinasa madinika sy salantsalany satria tsy lafo loatra ny sarany sady tsy sarotra ny manatanteraka azy.
Anisan’ny hampiasana ny antoka ara-bola omen’ny RLSF ny hanaovana azy ho antoka, raha sendra misy ny fahataran’ny fe-potoana handoavan’ny Jirama ny saran’ny herinaratra vokarin’ny orinasa madinika na salantsalany mpamokatra. Satria fepetra takin’ny mpampindram-bola hatrany ny antoka toy izany, ary izay ny anisan’ny antony tsy nahatanterahan’ny tetikasa maro teto amintsika, toy ny ABSA Bank Ltd ny RLSF amin’izany.
Firenena fahenina aty Afrika, nifanaraka amin’ny RLSF, i Madagasikara. Manampy an’i Bénin, i Burundi, i Malawi, i Ouganda ary i Zambia.